Nzira yekuziva sei iyo yakareba renji yemagetsi bhasikoro? | ebike Shuangye
musha Blog nhau Nzira yekuziva sei iyo yakareba renji yemagetsi bhasikoro?
Zuva ： 2020-07-03 Zvikamu:nhau Views: 2,116 maonero
Kana vatengi vako vachigara vachiona yakakwira yekufamba yekufamba iyo yavanogona kuenda kune sigle malipo, saka mileage inogona kunyange kuve iyo sarudzo yekuita kuti mutengi wako atenge. Maitiro ekuziva sei e-bhasikoro refu bhasiki yemagetsi bhasiketi. Vachareba zvakadii kuchovha bhasikoro remagetsi pane imwechete mubhadharo, kunze kwekunge vasina hanya nemaoko vachifambisa kumba nekuti bhatiri rakadhonzwa pamberi porwendo kupera. Asi daro rekufamba harisi nyore kuverenga, saka ese ebike anozove nekuyedza kana kuyera masosi, asi zvinogona kunge zvisina kunyatso kuva chokwadi. Zviri pachinzvimbo chekuti e-bhasikoro kuyedzwa kunowanzoitwa mune zvakadzora mamiriro - padanho pakatsemuka pasina zvinodzivirira, yakanaka mamiriro ekunze, nezvimwe.
Chaizvoizvo, haazi ese mabhasikoro emagetsi emabhasikoro anofunga kutasva kure kwee-bhasikoro. Kazhinji kutaura, iyo yekufamba nzvimbo yehurefu hwemagetsi bhasikoro inonyanya kutariswa nehukuru uye simba rebhatiri remagetsi uye mota.
Asi pane zvinhu zvinotarisisa huwandu hwe e bhasikoro, kusanganisira: kurema kwemutasvi, terrain (mugwagwa wakatsetseka maringe nemakomo), huwandu hwezvinhu zvaunotakura, mamiriro emhepo, mwero wakasarudzwa wekubatsira, kugona kwebhatiri, simba remota uye zvichingodaro. Kana iyo e-bhasikoro yekufamba renji iri yakakosha chinhu, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti danho rezvipenga rubatsiro uye bhatiri kugona kunokanganisa iyo renji iwe yaunogona kufamba pane imwechete bhatiri chaji.
Chikamu chePedal Rubatsiro
Iyo yakareba mhando yemagetsi bhasikoro yakajairwa ikaganhurwa kuva nzira yekubatsirana uye nzira yekubatsira.
Pedal assist mode inoiswa simba kana crank theisekelo. Saka iwe unogona kushandisa pedelec seyakajairwa bhasiketi pasina simba, kana kuita bhasikoro rinopa simba kune mafaro. Electric bike mota basa kana system ichiverenga rate iwe uri kufambisa. Iwe unokurumidza kukasira, nekukurumidza iyo mota inodzoka. Yakakura iyo simba, iyo yakawanda iyo iyo mota inopa. Ebike ine torque system iri nyore kwazvo kukwira makomo nekuti iwe unowana simba paunenge uchirida zvakanyanya, kunyangwe danho rako rekutsika-tsika rakaderera pane kana iwe uri pauriri hwakapetwa. Kazhinji, kune matatu kana mashanu chikamu chekubatsira padanho pane refu renji yemagetsi bhasiketi. Semuenzaniso, Shuangye bike yemagetsi ine 3 mazinga ekubatsira kwepedhi, pakati pe5 kusvika ku6 level inogona kusarudzwa chero danho.
Throttle assist mode inoreva kuti refu rakareba magetsi emagetsi bhasiketi anodhonzera pamberi apo bhatiri rinodzvanya bhatani, rinosundira lever (iyo throttle), kana kusenderedza mubato. Iyo throttle inowanzoiswa paharebha ye ebike uye yakabatana kune yemagetsi drive system iyo inodzora kumhanya kwe ebike. Iyo inowedzera kuomesa iyo inomanikidza iyo throttle, inokurumidza Ebike kuenda. Shuagnye ebike shandisa chigunwe chekuruza, icho chiri nyore nyore kushandiswa kwebhasiketi.
Kazhinji kacho, wedhiari anobatsira ebike ane hurefu hwakareba kupfuura hwekubatsira mubatsiri.
Bhateri rinopa simba kune mota, iyo inoita kuti mavhiri atendeuke. Mazhinji emagetsi akareba bhasiketi yemagetsi ingasarudza lithium bhatiri semagetsi magetsi, ndiyo inonyanya kubheja pamusika nhasi. Uye ndiyo yakakodzera mhando bhatiri kubatsira kureba iwe unogona kufamba pane imwe chete muripo. Iyo yakakwira huwandu, iyo simba rakawanda bhatiri rinogona kuchengetedza, zvakanyanya iwe unogona kukwira iyo e-bhasikoro. Kuenzaniswa nemamwe marudzi ebhateri, lithiamu-ion bhatiri ine simba rakakura density.
Maitiro ekuziva kuti ndeapi mabhatiri ekuti anogona kuita kuti iyo bike ienderere mberi. Muchokwadi, kumusoro voltage uye Amp-hrs zvinoreva kuti iyo yakazara mutero yakachengetwa yakakwira mubhetri.
Iyo inotevera kusiyanisa yekutarisa ndeye bhatiri kugona. Bhatiri inokwana kuverengerwa seWatt-hrs, inova chiyero chemutero uzere wakachengetwa mubhatiri. 36 volt uye 48 volt bhatiri yakajairika mumusika, kune zvakare 60 volt bhatiri kusangana wako mutengi anodikanwa muShuangye bhasikoro remagetsi. Asi pane zvakare akawanda bhatiri kugona kwe48 volt bhatiri kusarudza, senge 10ah-30ah yesimba rakasiyana uye mhando bhasikoro remagetsi.
Izvi zviviri chete zvakakosha zvinhu kukanganisa magetsi emagetsi bhasiketi refu renji kukwira. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvehurefu hwemagetsi bhasiketi, unogona kutarisa zvapfuura zvinyorwa kana kushanyira edu Official Website, zvakare inogona kusiira meseji pazasi.
Tags:yakareba mabhureki emagetsi mabhasiketi yemagetsi bike pedal rubatsiro
Prev: Shuangye tinosangana newe pa127 Canton Fair 2020
Next: Maitiro Ekuchengetera Emagetsi Bike Bhatiri Hutano